IFTIINKACUSUB.COM: Waxyabaha laga dhaxlo Akhriska.
SCWW .MAHAD ILAAHAY AYAA ISKA LEH ,NAGA DHIGAY MUSLIMKA .Waxa aan halkan salaan aad u qiimo badan uga dirayaa,akhristayaasha sharafta iyo karaamada leh ee websitkan IFTIINKACUSUB.COM ku xidhan, waxanan markasta idin leeyahay soo dhawaada ,waxa aan ku dadaali doonnaa in markasta aad websitkan aad ka heli-doontaan qoraalo iyo barnaamijyo idin raali galiya, idinkuna nala wadaaga waxkasta oo aad isleedihiin bulshada ayay wax u taraysaa, noogu soo hagaajiya fariimaha Gmailka,iftiinkacusub@gmail.com iyo khadaraar101@gmail.com .XASUUSIN MARNABA HA ILABIN NABIGA CSW SALIGIISA.
Waxyabaha laga dhaxlo Akhriska.
Maskaxda iyo unugyada qaabilsan fekerka oo horukac sameeya.Qofka wax akhriyaa waxaa uu si joogto ah u helaa fikrado kala duwan oo u horseedi kara horumar. Qofka wax akhriyaa waa mid si deg deg ah u jihayn kara fekerkiisa haddii ay soo wajahdo arrin deg deg ah oo aanu horay ugu tashan. Tusaale ahaan haddii ay doodi dhexmarto laba qof oo midkood yahay qof akhris badan midna aanu waxba akhrin, waxaa dhacaysa in qofka akhriska u saaxiibka ahi si sahlan uu horumar uga sameeyo dhinacii dooda.Sababtuna waxaa weeye qofka akhriska badani waa qof leh tababar dheeraad ah oo dhinaca maskaxda iyo maanka ah.
Ogaanshaha wax cusub: Dunida aynu ku dhaqanahay ma aha mid taagan balse waa mid mar walba uu ku yimaado isbedel. Waxyaalo horay u jirey ayaa dunida ka dhamaanaaya, waxaana soo kordhaaya waxyaalo cusub oo aan horay loo aqoon. Sidaas darteed akhriska badani waxaa uu kuu fududeynayaa inaad wax badan duniga ka ogaatid dunida kugu wareegsan.
Helitaanka khibrada dadka kale: Waxaa jira dad badan oo dunida ka tegey balse qoray waxyaalo badan sida buugaag, wargeysyo iyo waxyaalo kale oo badan. Ma heli kartid khibrada ama waaya-aragnimada dadkaas kol haddii aadan ahayn mid wax akhriya.
Waxyaalaha ay qoreen dadkaas aan maanta dunida ku nooleyn waxaa ay kugu dhalin karaan fikir kaa maqnaa, waxaa kaloo ay kugu caawin karaan inaad ka leexato qaladaadkii ay dadkaasi horay u sameeyeen. Waxaad kaloo ka dhaxli kartaa inaad kaga dayato waxyaalihii fiicnaa ee ay dadkaasi horay u sameeyeen.
Waxaa kaloo jira dad nool oo wax qoray balse aaney suurtogal kuu ahayn inaad la kulanto. Haddaba akhriska iyo baadigoobka aqoonta ayaa kuu sahlaaya inaad ka bogato waxyaalaha muhiimka ah ee dadkaasi qoreen.
Ummadaha lagu tilmaamo ilbaxnimada waa kuwa ay dadkoodu wax akhriyaan. Waxyaalaha ay wadamada horay u maray geliyaan lacagta badan waxaa ugu horeeya arimaha waxbarashada iyo barashada akhriska. Macalimiinta ugu khibrada badan dugsiyada wax laga barto waxaa lagu jiheeyaa oo ay akhriska baraan dhalaanka soo kacaaya.
Wadanka Sweden waxaa uu mid yahay wadamada horumrka ka gaaray dhinaca dhaqaalaha iyo wershedaha. Dalka sweden ma laha kheyraad dabiici ah sida basiinka , dahamka, macdanta iwm, balse waxaa uu horumarka dalka saldhig u ah tacliinta iyo dadka oo la baray akhris, laguna barbaariyey raadinta aqoonta. Waxaa dadka reer sweden yiraahdaan tiirarka aqoonta iyo ilbaxnimadu waa awooda ay dadku u leeyhihiin iney si wanaagsan wax u akhriyaan.
Haddaba waxaa muhiim ah inaan akhriska ka dhigano dhaqan joogto ah. Waxaa kaloo muhiim ah inaan isku dhiirigelino inaan wax akhrino si aan waxyaalo badan u ogaano. Waxaa lagama maarmaan ah inaan joogto ka dhigano booqashada meelaha wax lagu akhriyo sida maktabadaha buugaagta. Waxaa kaloo haboon inaan aalada casriga ah ee Internetka u isticmaalo ugana faa`iideysano dhinaca akhriska. Waalidiinta waxaa laga doonayaa iney caruurtooda inta ay yar-yar yihiin ku barbaariyaan dhaqanka wax akhriska iyo raadinta aqoonta. Gabayaa soomaaliyeed ayaa isagoo akhriska iyo aqoonra ka hadlaaya yidhi:
Teknoolojiyada aad aragtay ee lagu taxaashaayo
Taleefoonka ,taarkiyo weliba Tv-ga
Waxa aalad lagu tababartoo nolosha taabaaya
Aqoonyahan tijaabiyey oo tiigsadee helaye
Tacliin hadii aaney jirin tacadi sow maaha.
W/Q Maxamed Abdulahi Hasan(CEENAD)
Haddii aad tahay dadka wanaaga ka shaqeeya ku talagal dhibatadan oo kale in ay ku qabsanayso.
Qiso yaableh: Waraysigii gabadhii Jinniga ahayde ee Reymaa. Qaybtii 1-aad.
Qisso cajiib ah dhagayso VD.
Jinigu/Jinku in uu galikaro jidhka Bini’Aadamka ma xaqiiq jirtaa misse?
Dad badan oo Muslimiin ahi maanta waxa ay rumaysan yihiin in Jinigu/Jinku uu galo Dadka Jidhkiisi,shaqo iyo hawlna uu ka qabsan karo Jid...
SIRTA KU DUUGAN QOYSKA REER YURUB EE KOOBAN IYO EY-GOODA .W/Q: Khadar Aar.
Wax suura gal ah maaha in aan idin idhaahdo Sir iyo wax qarsoon oo gaar aniga ii ah ayaan ka ogaaday tiro yaraanta Qoysaska reer Yurub iyo...
Xisbigii Wadani oo la inqilaabay.
Dunidan aynu ku nool nahay waxyabaha had iyo goor dagalada lagu hoobto dhaliya waxaa kow ka ah isu fiirsashada mahadhooyinka siyasade...
Diintu Wadaad Caqli badan ayay u baahan tahay.
Wadaadka si khaldan Diinta u fahmaa waxa uu ka dhigan yahay oo kale dhakhtar daawo aan tii loogu talagalay aan ahayn qof bukaan ah u qora...
Qisso yaableh: Abbaayo iyo Abboowe waligay cay ayaan u aqaanay !
Gabadh u dhalatay Somaliland ayaa waxa ay gaadhay wadamada Yurub qaar ka mida,kadibna waxa ay isku dhiibtay sheegatayna in ay kasoo jee...
Qisso yaab leh: Aaboow Quraanka imaad barin!
Nin socoto ah ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu soo maray goob markaasi uu fadhiyo nin oday ah oo murugaysan isla markaana ay Ilmadu ...
Kulanka Madaxwyne Muuse Biixi iyo Ismaciil Buubaa waa gogol-xaadhka isfahamka Garxajis iyo Madaxwayne Biixi.
Kulan aan la shaacin isla markaana aan la sheegin waxa uu daaran yahay . Sawirro iyo suurado na tusinaaya in ay kulmeen Madaxwayne Biixi ...
Qisso: Intii aan idinka maqnaa Sadax goor ayay Dawladu i xidhay!!
Salaadii Jimcaha markii laga soo baxay ,ayaanu waxoogaa meel aan Masaajidka ka fogayn dhawr nin isugu nimi,Somali ayaanu nahaye markiiba ...
Sheeko iga yaabisay: Colaadii oo aan laga heshiin Tabliiqa ha raacin.
Sheekadani waxa ay ka mid tahay sheekooyinka aniga sida gaarka ah ii soo jiitay,waxa sheekadan iyo qaabka ay u dhacdayba iiga sheekeeyey i...
Fariin ku socota Dumarka Carmalka/Garoobta.Balaayo kaa maqan lama soo dhaweysto!
Maqalka dhagaha waxaa waayahan ku soo badanayay dilka caruur iyo hooyooyin, ay aabbayaashood ama adeerradood (stepfathers) sababaan. Na...
Waa maanso Cusub oo la magac baxday " burhaan" waxa tiriyay Abwaan,Yusuf Roobleh Xirsi(Sandoon)
Abwaanku waxa uu Maansadan kaga hadlayaa Diinteena Islamka iyo sida ay markasta uga warantyo qisooyin iyo taariikho soo jireena oo dunida...
Qisso dhab ah: Nin jacaylka uu u qabo Xaaskiisa iska saaray Qanjidhkii Taranka!
Iftiinkacusub.com: Waxa aan ahaa nin dhalinyaro ah oo shaqaysta,waxa aan ku noolaa wadamada qurbaha khaasatan kuwa Gaalada,waxa aan in ba...
Qisso ku yaab galin doonta, Gabadh la magac baxday "Been'cago leh"
Ilahay ayaa mahad wayn iska leh,ammaan iyo sharafna waxa ay u ahaatay Nabigeenii suubanaa Muxamad SCWW,wanaag oo dhanna waxaa koobsaday i...
Xadiiskii Nabiga CSW ee Somalida sheegay.
Bismillah, dabcan waxaynu walaalayaal maqalnay xadiisyo badan oo ka warramay islaamnimada Jaziirada Carbeed, dhulka Shaam iyo dhulka Faar...
Waa maanso Cusub oo la magac baxday "Duul Alloow bal ila daya" waxa tiriyay Abwaan,Yusuf Roobleh Xirsi(Sandoon)
Iftiinkacusub.com: Abwaanku waxa uu Maansadan kaga hadlayaa sida aanay marnaba u fiicnayn in la xalaashado ama laga dhigto hanti Gaar loo ...
Aannu idin dooranee, maxaad noo qabanaysaan ?
Bulshada reer Somaliland waxay is weydiinayaan waa kuma, musharaxa hannan doona mustaqbalka dhow jamhuuriyada barakaysan ee Somaliland ?
FACEBOOK IFTIINKACUSUB FADLAN LIKE SAAR
QORAALKA AAD DOONTO KA BAADH.
Qoralada Muhiimka ah .
'Coronavirus'waa Xanuun Shaydaani ah,sidaa waxaa yidhi Madaxwaynaha Shiinaha
Waxaa jira xidhiidh ka dhexeeya Dadku Diimaha ay aamin sanyihiin iyo hadba Xanuunada Dunida saf-mareeya sidan Coronavirus oo kale.
QAADKA/JAADKA AYAA KA XUN CORONAVIRUS.
Dunida Ilahay abuurtay sida ay u dhan tahay Qaadka waxa ay u taqanaa in uu yahay Mukhadaraad u baahan in waligii lala dagaalamo ,
Qisso Dawarsade ku dhacday “Poolisku waa daacad Madaxduna waa Tuug!
Lägg till bildtext Nin Carab ah Fakhri iyo gaajo la liita ayaa fadhiyay meel ka mida Albaabbada waawayn ee laga galo xarun wayn oo Mad...
Faransiiska Diimahu waa kasoo dabar go’ayaan, Islaamkuna kor ayuu usoo kacayaa.
Jean-Luc Mélenchon waa nin Faransiis ah dhalansho ahaana ku dhashay Dalka Marooko,waa siyaasiyiinta waawayn ee dalkan Faransiiska aadka ...
Cayilku waa sababaha Takoorka Shaqada.
Ma’aha wax sahlan oo si caadiya isaga yimi in Dumarka reer Yurub ay guntiga dhiisha isakaga dhigeen si ay Buurnaanta iyo Cayilka ula ...
Jawaab celin Qoraalka Maxamed Baashe X Xassan iyo samaynta Urur uu ugu magac daray BILAWGII MIDNIMO QARAN . W/Q : Khadar Ibrahim Aar.
Qoraalka aqoonyahanku ugu magacdaray « bilawgii Midnimo Qaran » uma baahna in si fog oo xeeldheer Duxda iyo ujeedada rasmigaa ee ku jirt...
Calamadaha lagu garto Waswaaska xun iyo shakiga.
Waswaasku waa fikrado cayiman oo ruuxu rumaysto taaso saamaynkarta dareenkiisa, hab dhaqankiisa iyo go’aanqaadashadiisaba, ayadoo ruuxu h...
KA DOORO QORALKAAD RABTO
CHOLERA "Cudurka Shuban biyoodka iyo sida loo kala...
Xadiis ku saabsan Dajjaal iyo calaamooyinka muujin...
DADKII DIINTA UGU SOO HORREEYEY
Habka Gudashada Xajka Iyo Cumrada Oo Kooban
Qiimaha Hooyadu leedahay .
Taariikhda Iyo Sidii Uu Ku Yimi Madfaca Ramadaanta...
Qissi yaab leh: Nin Haduu Naaxo La Mastaafurin Doo...
Qisso yaab leh: wuxuu dhintay isagoo sujuudsan.
Qisso yaab leh: Agoonkii guusha gaadhay!
Hooyo waa Hoy iyo Guri loo hoydo.
Geeridii Nabiga (NNKH) iyo Dardaarankiisii U Dambe...
Qisadii saxaabigii ka toobad keenay Zinada
Baro magacyada Bilaha iyo ayaamaha Somalidu lahaa...
Qiso cajiib ah: Caruur kala badalantay markii ay d...
Qisso yaab leh: waligaa ha yeelanin dhaqanka Daba...
Qofkasta oo Muslim ahi waa inuu Madaxa ka dhunkada...
Ramadaanka shan(5) badso shanna(5) yarayso.
Gabadh ka mida ehelka Janada.
Xukuumadaha dhaar u joogga ah.
Dhaarta Beenta ah iyo khatar teeda.
Su'aal la waydiiyay Cali Bin-abu daalib RDC
Laba arimood uu Quraanku sheegay kana yaabisay Dun...
Gabadha Muslimada ah ee Soonku ka jaban yahay maxa...
Geeridu waa wacdiyaha aamusan!
Qisso yaab leh: Aniga iyo xaaskayguba waxa aanu na...
Qisso yaab leh: Sadax caruura oo aan dhalay ayaan ...
Dhafarka iyo hurdo la'aanta waxaa laga dhaxlaa dhi...
Maxay tahay calaamadaha dhalma-deyska Dumarka?
Shilinku yaanu ku doorin.
Muxuu arkay nabigu (scw) isagoo lasocda Jibriil iy...
Fadliga bisha Ramadaan.
Xaramka Ilahay in aan tagay maxaa lagu garanaya, ...
Siduu ku baxday Halku dhigga ah "Haddii aan Karink...
Qisso layaableh:Saxiibka oo geeriyooday ,hadii las...
Qisadii dhabta ahayd ee Dulqarnayn.
Bisha Ramadaan waa in aynu toobad keenka cusboonay...
Qisso cajiib ah:Ninkaasi waa Tuug ee ha la iska il...
Waar Dunida nabadi kama jirto!
Maxaad ka taqaanaa Diiwaanka guud ee Boqortoyadii ...
Maxaa sabab u ah guuldarada haysata jabhadda OLNF....
Qisso yaab leh: Ninkani Aabahay maaha waa shaqalah...
Shaydaanka iyo xariifnimadiisa.
Aqoonta iyo dadkeeda.
Way is caayi taqaanaaye, isma caawin taqaano!
Dawlad iyo Xukuumad.
Waxtarka dhirtu ay leedahay.
Waa maxay Saxiib?
Maansadii la magac baxday ,XUSUUS waxaa tiriyay Ab...
Miyaad garaadsatey mise waad gumowdey?
DHEELI-TIRKA, FARXADDA IYO FADLIGA BISHA RAMADAAN:...
Waxaa wax lala yaabo ah in neef Geel ahina uu Jana...
Qisso yaab leh: Gabadh u dhalatay dalka Hindiya oo...
Qisso layaab leh: Tuug noqo kadibna dadka aad xada...
Xisaabta aakhiro waa mid ka xeel dheer tan aduunka...
Qisso cajiib ah:Arooskii Geerida iyo nolosha u dha...
Qisso yaab leh: Baga ayay dhimatay ,haddii aan dha...
Qisso layaab leh;Rayiisle(Tima-jare) ayaan leyahay...
Qisso yaab leh:Fariin Aakhiro iiga timi !
Qisso yaab-le: Sheeko na dhex martay aniga iyo sha...
WAX KA OGOW ILMAHA KU DHASHA MIISAANKA YAR?
Qiimaynta tayada, god-daloolooyinka, caqabada iyo ...
Waa maxay qorshe nololeed?
Sheeko gaaban oo mucjiso badan: Muhiimaddu waa in ...
Maxaa loogu diiday haweenka Somaliland inay garsoo...
Faqiir qarash badan: “Laankaruusar gado, galaydana...
Wax-badan ka ogoow ,waxa uu yahay, cudurka Babaasi...
Iska baro astamaha budhcadda caafimaadka!
Qisso cajiib ah: Waa maxay kalmadda ah Diimaha Cuq...
Sideed Mas’alo oo Mas’uulka xumi sameeyo, keentana...
Qisso cajiib ah: Salaadii aan kugu daba tukaday an...
Wadaniyadu waa maxay?
Allah Qof Qof Ayuu Dadka U Xisaabinayaa ee Uma Xis...
Qosolka: Erayada ay isticmalaan dhalinyarada ee ku...
Qisso yaabadan: Cimiladii iyo aniga ayaa heshiin w...
Qisso cajiib ah: Ma gabadha misse Shabeelka!
Qisso ku yaab galin doonta:Malakul Jibriil waxyigi...
Cali Khaliif Galaydh oo Hargeysa soo gaadhay maant...
Ajiyow marka aad Timaha Xiiraysaan waa shaqo shara...
Taariikh aan horey u dhicin: 4-boqor oo dunida dha...
Dhagartii Internet-ka: Qiso Xanuun badan oo qabsat...
Qiso aad u xanuun badan Wiilkii Caasiga ahaa ee Ho...
Tobanka qodob oo aad dadka kusoo jiidan karto, mar...
Haa, Noqo laba mid!!
Maanso cusub oo la magac baxday :BULSHOOY DHAQAN B...
Abaarta ma inaga dooranay in ay inagu dhacdo sanad...
Wax ka baro Taariikhda Reer Maanyo.
Waligaa miyaad maqashay, Quraan Fatuma Bintu-saruu...
Raggii Muslimiinta dib u dhigay!
Qabiiladii reer Shan Biyood.
Warqad siidayn maxaabiis oo Maraykanku kaga codsan...
Seedigaa waa Mindi laba af-leh.
Anshaxa saxafada iyo goobaha dagalada.
Dabaal deggii 18 May Somaliland oo loo bedalay qaa...
Cuntada guriga kuu taala ,maxaad maalin-kasta Suul...
Dadka aadka u cayilani ma caafimaad qabi kartaan?
Qisso cajiib ah :-Waxa uu i furay annaga oo aan is...
18 May siday ku timi?
Qisso cajiib ah: furfuridii saddexda xigmadood .
© Copy Right 2016 - 2017 iftiinkacusub All Rights Reserved.. Thème Simple. Fourni par Blogger.